सुकुम्बासीका १५० घर डोजरले भत्काउदै, बच्चादेखि वृद्धसम्मका थामिएनन आँसु, हे भगवान अब के होला! (हेर्नुहोस भिडियो)
झापाको कमल गाउँपालिका वडा न: पाँचमा रहेको एउटा गाउँ नै डोजरले भत्काउन सुरु गरिएको छ । करिब दस घर भत्काइ सकिएपछी अन्य एकसय चालीस घरपनि भत्काउने सुचना दिइएको छ भनेर स्थानियले जानकारी दिए । बीस बर्ष अगाडी नै बसेको बस्ती अहिले आएर एकाएक उठाउन खोजिएपछी बालकदेखि वृद्धसम्मका आँसु थामिएका छैनन ।
कोहि गर्भवती महिला रहेको कोहि वृद्ध रहेको र जाने कतै ठाउँ नभएकाले कतै जाने केही खाने पनि ठेगाना नभएका कारण एक सय पचास घरको बिचल्ली नै भयो । कस्ले गर्दैछ यस्तो काम जसले यतिधेरै वृद्धदेखि बालबालिका डाको छाडेर रुन बाध्य छन ? तलको भिडियोमा हेर्नुहोला बालक देखि वृद्धसम्मले डाको छाडेर यस्तोसम्म भनेको सुन्दा कस्को मन रुदैन होला! (हेर्नुहोस भिडियो)